Homeसमाचारमाईतीले दिएको सुन बेचेर खोलिन् वर्कशप, ४३ बर्षिय सरस्वति यसरी बनाउँछिन् मोटर साईकलहरु (भिडियो सहित)
March 9, 2021 admin समाचार 5795
गरे के हुन्न र नेपा’लमा ? अलि कत्ति लगानी अनि मेहनत त्यसपछि धैर्यता, बस् यत्ति भए स’म्भवत खाडीमा हुने कमाई नेपालमै हुन्छ । यसको ज्वालान्त उदारण हुन् काठमाण्डौं रातोपूलकी आशिष मोटर’साइकल वर्कशपका संचा’लिका सरस्वति सुवाल ।
सुरुमा माईती’बाट पाएको सुन बेचेर खोलि’एको उनको यो वर्कशप अहिले मज्जाले चलिरहेको छ । नयाँ शाखा’को सोचमा रहेकी सरस्वति आफ्नो कमा’ईमा सन्तुष्टि पनि छिन् । त्यसो त यो व्यवसाय कत्तिको सहज छ त ?
हेर्नुहोस् यो भिडियो अन्र्तवार्ता…
यो पनि पढ्नुहोस्- काठमाडौं-नेपाली कां’ग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीलाई शनि’बारदेखि फेरि भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । मस्तिष्कघात भएर नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत केसीलाई स्वास्थमा समस्या आएपछि पुन भेन्टि’लेटरमा राखिएको हो । जोशी फागुन १३ गते अस्पता’लमा भर्ना भएका थिए ।
स्वास्थ’मा क्रमिक सुभार आएपछि जोशीलाई भेन्टिलेटरबाट निकालिएको थियो । तर शनिबार बिहान एक्का’सी श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि भेन्टिलेटरमा रा’खिएको बताइएको छ ।
‘भेन्टिलेटरबाट नि’कालेको २४ घण्टा भइसकेको थियो । तर शनिबार बिहान एक्कासी समस्या आएपछि पुनं भेन्टि’लेटरमा राखिएको बताइएको छ ।उनी अहिले पनि कोमामा नै रहेको र ब्लड प्रेसर, हर्ट विट लगायत नर्मल नै देखिए’को बताइएको छ । – ओएस नेपालबाट
April 27, 2021 admin समाचार 5583
September 22, 2020 admin समाचार 12929
December 25, 2020 admin समाचार 9226
निकै नैसुमधुर स्व’रकी धनी बेनिषा पौडेल दुख पोख्दै मि’डियामा आईन् । बिगत २ बर्षदेखि सँगीत क्षेत्रमा रहेकी बेनिषा सँ’गीत क्षेत्रमा सोचे जस्तो सफ’लता नपाउँदा धेरै दुखी छिन् । साथै परिवा’रको तनाव ठुलो छ । सानै